EditShare Showcases Award သည်မီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းမှုအစီအစဉ်၏ BroadcastAsia 2019 တွင်အနိုင်ရရှိခြင်း NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » BroadcastAsia 2019 မှာမီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာ Solutions ၏ lineup အနိုင်ရရှိမှု EditShare ဟန်ပြဆုချီးမြှင့်
BroadcastAsia 2019 မှာမီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာ Solutions ၏ lineup အနိုင်ရရှိမှု EditShare ဟန်ပြဆုချီးမြှင့်
Basingstoke, ဗြိတိန် - ဇွန်လ 4, 2019 - EditShare®တစ်အသိဉာဏ်စကေးထွက်သိုလှောင်မှုအတွက်နည်းပညာခေါင်းဆောင်, မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (ပေးခဲ့သည်) နှင့် automated အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (AQC), ရှာဖှပြီးနောက်ဖြေရှင်းချက် HelmutFX, Adobe Premiere Pro ကို CC ကိုစီမံကိန်းများနှင့်အသုံးပြုသူများကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်နောက်ကျော-ရုံးဖြေရှင်းချက်ပြသပါလိမ့်မည် စီမံခန့်ခွဲမှုကနေတစ်ဆင့် EditShare စီးဆင်းမှုနှင့် VBox, လာမယ့်မျိုးဆက် '' Channel ကို-in-a-Box ကို '' ပလေးအောက်ကိုအလိုအလျောက်စနစ်, ဒီနှစ် BroadcastAsia မှာ။ EditShare ထို့အပြင်ယခုအသစ်ကသိုလှောင်မှုရောင်းချသူတစ်ဖောင်များအတွက် multicam နှင့်ဝေးလံခေါင်သီတည်းဖြတ်ရေးစွမ်းရည်နှင့်ထောက်ခံမှုအနိုင်ရအသစ်ကသူဟာ Emmy ဆုနှင့် HDR ကိုလိုက်နာမှုစိစစ်အတည်ပြုထောက်ပံ့ပေးသော IMF က-အဆင်သင့် QScan, featuring ပါက Multi-ဆုရ EFS နဲသိုလှောင်မှုပလက်ဖောင်း, Flow မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုမည်ဖြစ်သည် Dolby Vision ၏ရန်စွမ်းရည် post-ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများသတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း။
အဆိုပါဖြေရှင်းချက်ရပ်တည်ချက်အပေါ်ပြသပါလိမ့်မည် #6E4-01 ဇွန်လ 18th-20th အပေါ် BroadcastAsia, Suntec City, စင်္ကာပူအတွက် Suntec စင်္ကာပူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း & ပြပွဲ Center မှာ 2019 မှာ။
တက်ရောက်တစ်ဦးနှင့်အတူပုဂ္ဂလိကသရုပ်ပြစာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ် EditShare ဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြေရှင်းချက်ဦးပထမဦးဆုံးလက်တွေ့မြင်မှလုပ်ငန်းအသွားအလာကျွမ်းကျင်သူ [အီးမေးလျ protected] ဒါမှမဟုတ်ရပ်တည်ချက်အားဖြင့်ရပ်တန့်။
အကြောင်းအရာ EditShare BroadcastAsia 2019 မှာမီဒီယာ Solutions:
HelmutFX, ထုတ်လွှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာကျွမ်းကျင်သူ MoovIT တစ်ဦးထံမှ Adobe Premiere Pro ကို CC ကိုစီမံကိန်းများနှင့်အသုံးပြုသူစီမံခန့်ခွဲမှုကျော-ရုံးဖြေရှင်းချက်ယခုမှတဆင့်ရရှိနိုင် EditShareကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 's ပြန်လည်ရောင်းချသူများကွန်ယက်ကို။ HelmutFX စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစကေးကို Adobe ဖန်တီးမှုများထားရှိ၏စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုရိုးရှင်းစွာနှင့်အတူ Adobe က Workflows ပိုကောင်းစေပါတယ် EditShare မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းစီးဆင်းကြသည်။
အဆိုပါ toolset အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများကို၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုစီမံခန့်ခွဲနှင့်အတူကူညီပေးဖို့ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အလိုအလျောက်တစ်အလွှာကိုထည့်သွင်းဖို့လှပသောပေါင်းစပ်။ ဒီဇိုင်းအတွက် modular, HelmutFX Workflows တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးဖယ်ရှားခြင်း, ဖန်တီးမှုထုတ်လုပ်မှုကိုအာရုံစိုက်ဖို့ပိုပြီးလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်အတူအယ်ဒီတာများသည်အားလုံးချိတ်ဆက်စနစ်များ (စသည်တို့ကိုစားသုံးမိ, archive ကို, backup လုပ်ထား, Mam, Pam) နှငျ့ဆကျသှယျနိုငျမညျဖွစျသညျ။ ဤသည်ကိုထောက်ပံ့ပေး EditShare ကုမ္ပဏီအတွေးအခေါ် HelmutFX ၏အဓိကမှာဖြစ်သည့် ပို. ပင်၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းအသွားအလာမြှင့်တင်ရန်နှင့်ချဲ့ထွင်ရန်ထို option နှင့်အတူဖောက်သည်မှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်: editshare.com/products/helmut-fx.
VBox - '' Channel ကို-in-a-Box ကို '' ပလေးအောက် Automation
EditShare'' s ကို VBox ခေတ်သစ်ထုတ်လွှင့်ဌာနများ၏လိုအပ်ချက်နှင့်တောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဒီဇိုင်းတစ်ခု turnkey, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပလေးအောက်ကိုဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်, ဂြိုဟ်တု အော်ပရေတာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများ။ VBox တစ်ဦးကိုနောက်မျိုးဆက် '' Channel ကို-in-a-Box ကို '' များပြားလှ IP ကိုပလေးအောက်ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများနှင့်အတူအပြင်းအထန်အော်ပရေတာချန်နယ်စိတ်ပြည့်စုံငြိမ်းချမ်းရေးကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းပလေးအောက်ကိုအလိုအလျောက်စနစ်နှင့် HD နှင့် UHD ကို formats ။ ဒါဟာ built-in On-ဝေဟင်ဂရပ်ဖစ်, အသုံးပြုရလွယ်ကူတဦးတည်းအတွက်အပြည့်အဝဝေးလံခေါင်သီသီချင်းစာရင်းကိုနှင့်လွှဲပြောင်းစီမံခန့်ခွဲမှု, ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောကျစ်လစ်သိပ်သည်း server ကိုဖြေရှင်းချက်နဲ့ 4K ဗီဒီယိုကပလေးအောက်ကိုဖြေရှင်းနည်းပါပဲ။ နှင့်
VBox နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အတည်ပြု EditShareမစ်ရှင်-အရေးပါပလေးအောက်အဘို့ '' s ကိုစမတ်ထိုကဲ့သို့သော QScan AQC နှင့် Flow ပေးခဲ့သည်အဖြစ်လုပ်ငန်းအသွားအလာ tools များအဖြစ် EFS နဲသိုလှောင်မှု node များ။ VBox နှင့်အတူ, EditShare တိုင်းတီဗီဘူတာရုံ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖြည့်ဆည်းဖို့ကပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်အတူတစ်ဦးစွယ်စုံ, ရည်ရွယ်ချက်-built ပလေးအောက်ပလက်ဖောင်းအောင်အလိုအလျောက်မှစားသုံးမိရာမှတစ်ဦးတစ်ခုလုံးကိုအဆုံးမှအဆုံးသို့ဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.editshare.com/products/vbox.
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ BroadcastAsia BroadcastAsia 2019 ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း EditShare EditShare လုပ်ငန်းအသွားအလာ isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB16 nabshow 2019-06-04
ယခင်: Showtime ၏ The Chi အသက်ရ Southside ချီကာဂိုကိုယူခဲ့ဖို့ Blackmagic ဒီဇိုင်းကင်မရာများကိုအသုံးပြု
နောက်တစ်ခု: Dejero ယားရော့ခ်ဖျော်ဖြေပွဲမှာ 5G ကျော်ကမ္ဘာ့ပထမဦးစွာလူ့ hologram ထောက်ပံ့